Ny Trump, Q-Anon ary 'manadio ny angano lalina indrindra' (Robert Jensen, Janet Ossebaard): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 Martsa 2020	• 11 Comments
Na dia toa niala teo amin'ny antoko politika ankavanana aza i Robert Jensen, dia mbola mpankafy an'i Trump lehibe kosa izy. Ireo horonan-tsariny dia jerena be dia be, toy ilay amin'ilay kintana vaovao eny amin'ny habakabaka; ramatoa mino ny UFO ary manangona faribolana: Janet Ossebaard.
Tsara izany raha ny mino ny UFO na faribolana, fa raha ny mahaliana ahy dia tsikaritray ny paikadin'ny rohy mampifandray ireo mpikaroka ny fahamarinana. Na izany aza, samy mino i Jensen sy Ossebaard fa hamonjy an'izao tontolo izao i Donald Trump. Ao amin'ny Ossebaard izao dia mifandray tsara amin'ny tantaran'ny 'lalina indrindra' sy ny 'Q Anon'. Robert Jensen dia maka azy kely kokoa, satria angamba izy dia manandrana tsy miaraka amin'io teha-piraisana tsikombakomba io raha mbola azo atao.
Hiezaka aho ny hanazava aminao ny antony mahatonga aho mino fa mifandraika amin'ny tranokala fiarovana eto izahay. Tsy manao an'izany aho mba hahatonga ny olona mainty, fa manao an'izany aho farafaharatsiny mba hanomezana fomba fijery hafa an'ity raharaha ity mba hahafahanao mampiditra azy ao amin'ny eritreritrao.
Inona avy ireo fandrika harato azo antoka?
Ny vatan'ny tambajotra fiarovana dia olona izay, amin'ny alàlan'ny andian-jiro mitovy hevitra izay heverintsika fa afaka fantatsika ny ao ambadiky ny fampahalalam-baovao, dia malaza amin'ny haino aman-jery hafa ary tsy mahita fanivanana kely na avy amin'ny media na media sosialy. Manosika ny ankamaroan'ny haino aman-jery hafa anaty tamba-jotra izy ireo. Ny fantsona mahazatra dia mitatitra momba azy ireo ihany koa (na dia ratsy aza izany: izay mitombo anao no mifantoka). Ankoatr'izay, dia mety dia notohanan'izy ireo mafy ny isa ilaina IMB'ers ary avy amin'ny olona izay milatsaka fotsiny ho an'ny 'tantara tsara', ao amin'ny media sosialy.
Taorian'ny 911, ohatra, ianao dia nisy olona toa izany tany Etazonia; olona iray izay nanohana mpanohana betsaka tamin'ny fametrahana fahitana hafa momba ny famakiana ofisialy 911. Na inona na inona no hinoanao na tsia ny 911 dia asa anaty ao anatiny. Io Ace Baker io dia nahavita nahazo betsaka taorian'ny olona nino fa 911 dia asa anaty ao anatiny. Nandrakitra ireo teoria isan-karazany izy ary nodorany fa ratsy ny tantara. Izy dia toa ny toetran'ny 'hetsika fahamarinana', araka ny niantsoana azy.
Vantany vao nahazo faniriana lehibe izy dia nanao zavatra tsy nisy nantenaina. Nandritra ny seho iray tamin'ny onjam-peo, dia nanao veloma tampoka tamin'ny ray aman-dreniny, ny vady aman-janany izy ary naheno basy ianao, dia nangina izy ary niteny ilay mpanolotra: "manantena aho fa tsy marina izany." Tsy ela taorian'izay, ny Ace Baker io dia nivadika ho velona indray. Tamin'izany no nanamafisany ny fahatokisan'ny 'hetsika fahamarinana' amin'ny andiany iray. (mihaino eto ny sombintsombiny)
Saingy, misy koa ny paikady maro hafa, toy ny iray izay misy anarana malaza amin'ny 'hetsika fahamarinana' dia nambara taty aoriana ho mpitarika ao amin'ny sekta 'Zanaky ny Andriamanitra; sekta izay mampiely firaisana amin'ny ankizy kely. Satria afaka nifandray tamin'ny olona maro tamin'ity 'hetsika fahamarinana »ity i Zen Gardner, dia nanjary voan'ny aretina daholo ireo olona rehetra ireo.
Betsaka ny kitapo fiarovana azo antoka no ampiasain'ny serivisy hanambarana ny fahamarinana tsotra na ny fahamarinana hita maso. Satria natosika hatraiza hatraiza izy ireo dia nahazo mpanaraka be dia be. Mitovy ny fahitan'i Robert Jensen sy Janet Ossebaard. Ny tanjona lavitra dia ny hoe satria sambo manarato dia afaka mitarika olona maro araka izay azo atao izy ireo ao anaty harato fiarovana, ary avy eo dia mitsoka ny sambo jono miaraka amin'ny tantara ratsy. Izany dia miantoka fa azonao atao ny mahamenatra an'ireto olona mitsikera ireto ary miaro azy ireo tsy hiraraka amin'ny haino aman-jery mahazatra sy politika.
Manadio ny rano lalina sy Q Anon
I Robert Jensen sy Janet Ossebaard dia samy manana fanantenana lehibe an'i Donald Trump. Ny plan Q Anon dia mifototra amin'ny olona mametraka hafatra mi-encryption amin'ny Internet, izay miresaka momba ny lalina kokoa izay tian'i Trump hianjera ary i Donald Trump izay miady amin'io lalina io. Misy tsaho milaza fa Q Anon dia karazana programa AI ary izaho koa nanolotra izany safidy izany tao amin'ireo lahatsoratra teo aloha.
Nandresy ny Supercomputer Deep Blue an'ny IBM toy ny fiandohan'ny taona 1996 Tompondaka eran-tany Kasparov miaraka amin'ny chess sy ny Quantum Computer Alphabet an'ny Google tamin'ny taona 2016 tompondaka eran-tany amin'ny lalao be pitsiny indrindra Mankanesa mba hikapoka. Tena azo inoana fa mampiasa solosaina super amin'ny paikadin'izy ireo ny governemanta miaraka amin'ny haino aman-jery sy haino aman-jery hafa, miaraka amin'ireo angon-drakitra lehibe rehetra (izay angonin'izy ireo amin'ny tena fotoana).
Fa avelao eo eo afovoany. Raha ny fotokevitra, azontsika atao ny mahafantatra fa ny governemanta dia mahalala fa misy ny fanoherana hatrany eo amin'ny olona iray. Ka raha afaka manangana an'izany fanoherana izany izy ireo ary haka olona be dia be, dia tsara izy ireo. Q Anon dia mety ho ampahany amin'izany paikady fiarovana izany.
Ohatra iray amin'ny hevitra Q Anon azoko omaly. Toa faminaniana tanteraka izany rehetra izany, noho izany dia manome ny fahatsapana fa tena miasa miaraka amin'i Trump i Q. Ahoana no ahafahan'izy ireo mahalala izany rehetra izany? Mamaky ihany:
Hitohy ny fitsipiky ny trano maneran-tany mandra-pahatongan'izany rehetra izany amin'ny 10 aprily (Zoma tsara). Talohan'izay dia hanomboka ny 10 aprily ny 1 andro "haizina", ary hifarana koa ny 10 aprily izao.
Vantany vao nanomboka ny 'haizina', POTUS dia handefa Tweet miaraka amin'ny: Amerikanina namako… Tonga eto amintsika ny Storm …… ”(" Ry Amerikanina namako ... Tonga ny Storm ...) "Ny toetran'ny 1 aprily ' tamin'ny voalohany manamaivana ny ahiahy momba ny fisehoan'ny "haizina." Rehefa mitranga ny "haizina" dia hisy spike amin'ny tahotra mikorontana manodidina ny Coronavirus sy vonjy maika. Ity vonjy taitra ara-pitsaboana ity dia nambara ho talohan'ny 1 aprily tany amin'ny tanàna maro (sy firenena. Vert.).
Betsaka ny olona nametraka ny tenany teo ambanin'ny fisamborana trano ary ny ankamaroany dia nanangana fitaovam-tsakafo, sns.
Any Aostralia, dia mahazo $ 31 amin'ny 750 martsa ny tsy an'asa sy ny fisotroan-dronono. Ny firenena hafa dia hanao fandaharana toy izany koa, ka vitsy ny mosary maty. Ny fivarotana vonjy taitra sasany dia hijanona hisokatra hividy ny entana ilaina indrindra, fa hikatona ny ankamaroan'ny fivarotana.
Nandritra ny 10 andro an'ny ‘haizina’, tsy misy ny media sosialy na Internet. Hisy herinaratra, fa tsy misy radio sy fahitalavitra. Tsy hisy gazety hivoaka. Ny tafika ao amin'ny firenena tsirairay dia hanidy ireo mpitory ireo.
Ny POTUS dia hanana ny fomba azo itadiavana olona maneran-tany mandritra ny 10 andro 'haizina' ary izany dia amin'ny alàlan'ny Rafitra Fandaharana maika. Ny tafika rehetra manerantany dia hampita izany amin'ny fahitalavitra sy ireo fitaovana any amin'ny firenen'izy ireo.
Ny POTUS dia ho amin'ny andron'ny "maizina", na any ivelany, na amin'ny Airforce One. Ny antony antsoina hoe ny fampiasana ny Airforce One dia natao ho fiarovana sy / na loza mety hitranga amin'ny aretina. Ny Rafitra Broadcast System dia alefa avy amin'ny Airforce One. Noho izany dia hisy valim-baovao mahomby, ankoatra ny POTUS.
Horonantsary vita amin'ny matihanina dia alefa eran-tany amin'ny fahitalavitra sy fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny Rafitra fampielezana maika. Ny ao amin'ny atiny dia hanazava ireo fisosorana rehetra, heloka bevava ary antsipirihany momba ny zavatra rehetra. Ho afa-mianakavy ny votoaty ary tsy azo inoana.
Ny POTUS dia hanazava ny fomba nangatahin'ny tafika amerikanina hanakodia ny Fanjakana lalina ary tsy «mpanao politika» izy. Hamarininy ny fampahalalana Q. Ireo horonantsary fanadihadiana ireo dia haneho fitanisana an-tsoratra avy amin'ireo mpanao politika ao amin'ny Fanjakana lalina sy ireo olona ambony. Ny rafitry ny fifehezana an'izao tontolo izao dia hozavaina. Porofo ny heloka bevava. Hatao ampahibemaso ny fanambaran'ny tribonaly miaramila.
Hasaina halefa ireo fanolorana ireo, hoy 8 ora isan'andro, mandritra ny 10 andro manontolo. Ireo famerimberenana dia hisy ny ora maro ka ireo izay miasa ary ireo mpamonjy voina dia tsy hahita na inona na inona. Hitohy amin'ny ora 24 isan'andro isan'andro ny fandaharana. Ny fianakaviana dia tsy manan-javatra hatao afa-tsy izany. Ny horonan-tsary mampientam-po indrindra miaraka amin'ny porofo dia tsy ho an'ny rehetra, afaka jeren'ireo izay maniry aorian'ny 10 andro 'haizina' ao amin'ny Internet.
Hisy ny fikorontanana faobe, horohoro ary fisafotofotoana. Ny andraikitray amin'ny maha-tia tanindrazana azy dia ny hanome fahalemena, fanamafisana, famindram-po ary fiantohana. Betsaka ny tia tanindrazana izay tsy natahotra hiteny loatra no tsy sahy niteny.
Tsy azo atao, fa azo atao, ny JFK Jr sy ny hafa dia handray anjara amin'ny fahatokisan'ny fandidiana. Rehefa tonga ny 10 andro "haizina" amin'ny zoma farany faran'izay dia hisy fivontosana ara-panahy lehibe.
Amin’ny zoma tsara izao, holazaina ny zanak’olombelona fa azo antoka izao ilay viriosy ary afaka miverina sy miaraka miaraka. Hipetraka ny trano fiangonana, ny synagoga ary ny moske. Hisy ny fijaliana maro, fa ny fanamaivanana ihany koa.
Ny isan-jatony kely, izay 5% angamba, dia tsy ho voafehy intsony ary misy atidoha be lavitra hanaiky ny fahamarinana. Toy ny mahazatra dia hiteraka fikorontanana.
Ny Fanjakana lalina dia hamoy ny fifehezana ny zavatra rehetra mandrakizay. Hanara-maso ny onjam-pahitalavitra sy ny mpamoaka gazety mba hisorohana ny vava manavanana ny miaramila. Aorian'ny faran'ny mainty dia hiseho tanteraka ireo haino aman-jery efa niorina ary tsy ho afaka handatsa ilay tantara.
Ny olona any amin'ny Fanjakana lalina izay tsy nitsoaka ary tsy noroahina ho any Bay Guantanamo dia hanaiky ny famonoan-tena tamin'ny faran'ny herinandro 11-12, 2020. Ireo olona tsy natokisana dia havela hiaro tena amin'ny vahoaka marobe.
Ankehitriny dia mifanaraka tsara indray amin'ny alàlan'ny valan-dresaka nataon'ny Doald Trump omaly hariva izay nanambara fa tiany ny Amerika afaka hifindra malalaka indray ary handeha am-piangonana mandritra ny Paka (jereo businessinsider.com). Ka ny tantara Q Anon dia toa mitombina tsara amin'ny lazain'i Trump, mahatonga azy ho azo itokisana. Tsy misy tsy mahatsapa fa ny serivisy dia manan-tsaina milalao ireo toby roa.
Ka inona no tsy mety amin'i Robert Jensen
Tsy ho henoinao aho raha milaza fa misy zavatra tsy mety amin'i Robert Jensen. Heveriko fotsiny fa mpiasan'ny harato fiarovana izy ary amin'ny maha-mpampita fahaizana mahay dia mahalala tsara ny fomba hamenoana ilay harato fiarovana izy. Ny paikadiny dia tsy ny hanambarana mivantana ny teoria Q Anon. Na izany aza, efa nidera an'i Donald Trump tao amin'ny lahatsary farany nataony izy ho an'i Trump nilaza fa tsy tokony hiharatsy noho ny olana ny vahaolana.
Jensen manantitrantitra fa ny fepetra fanakanana coronavirus dia be draconian ary maro no hanaiky azy. Mifantoka amin'ny taham-pahafatesana izy ary ny fifandraisana amin'ny fandrobohana ny firenena iray manontolo, anisan'izany ny fiantraikany ara-toekarena. Izy koa no mahazo an'io Bloomberg antontan-taratasy, izay efa natoroko teo amin'ny lahatsoratra teo aloha. Manazava io fa ny 99% ny olona maty tany Italia dia efa manana fepetra hafa ahafahan'izy ireo maty.
Izao dia hiteny ianao hoe:Eny ary? Inona no tsy mety amin'izany? Tena marina izy avy eo !?“Nohazavaiko etsy ambony fa tsy voatery mandainga ny harato. Izy ireo dia afaka mampiseho anao ny fahamarinana feno. Ny tanjon'ny harato fiarovana dia ny hoe mampifandray anao amin'ny fisainana manokana iray ianao. I Donald Trump no olona amin'ity tranga ity.
Raha toa ka, taty aoriana fa tsy manadio ny lalina indrindra i Donald Trump ary raha mitodika any aoriana any fa hiantso izao tontolo izao fa i Donald Trump, ohatra, dia nanao fahadisoana lehibe tokoa tamin'ny nandaozany ny Amerikanina teny an-dalambe tamin'ny faran'ny herinandro Paska (satria raha, ohatra, niseho tampoka tampoka indray ilay valanaretina coronavirus, fa vao mainka mahery setra kokoa), dia ny mpanohana an'i Donald Trump sy i Jensen no voakapoka tamin'ny famoahana iray. Amin'izay dia hiantso ny fampidirana am-ponja rehetra ireo tsy nanaiky ny hahita fa mampidi-doza ny virus corona.
Azafady, azafady: ny media dia mety hanaparitaka an'io fihoaram-peo io, saingy tsy ho afaka hieritreritra tsara amin'ny alàlan'ny paikady fiarovana sy ny fipoahana ny jono Robert Jensen intsony ianao. Raha ny marina, ny 'fisainana mitsikera' no tena toe-tsaina mampidi-doza indrindra tamin'izany.
Inona no tsy mety amin'i Janet Ossebaard
Tokony hazava fa tsy any hanafika ny olona tsirairay aho, toy ny efa tao anatin'ny 7 taona mahery izay no nataoko. Tsy tiako ny 'ambanin'ny fehikibo'. Mampitandrina ny amin'ny paikady tokony hojerena aho. Ny zava-misy fa misy olona mety miasa mangingina amin'ny serivisy ary mamela ny tenany ho apetraka amin'ny maha-harato ny harato ho an'ny feon'ny fieritreretantsika sy ny karma.
Ho an'i Janet, mazava fa manambara ireo teoria Q Anon ao amin'ireo horonantsary izy. Ka mamporisika anao hipetraka sy miandry ary hahita izay mitranga. Heverina fa akaiky ny famonjena an'i Trump. Efa nanoratra momba an'io aho dit: en dit: lahatsoratra.
Inona àry no azontsika atao? tsara mino, inona no mbola tsara?
Ny tena eritreritra dia ny vokatra azo rehefa sendra ny fahadisoam-pananana ianao rehefa tratra tao anaty harato miaro ary nilentika ny sambo iray. Izay no mahatonga ahy hanondro hatrany ny momba ny fahatsiarovanao. Ary izany dia amin'ny heviny hafa izay nanirahan'i Robert Jensen an'io teny io tamin'ny fandaharana farany nataony.
Izany dia momba ny 'fahatsiarovan-tena' amin'ny fahatsapana hoe 'ny fiandohan'ny maha-olombelona anao'.
Ao amin'ny bokiko dia miresaka momba ny tena fahatsiarovan-tena aho ary miresaka momba ilay otrik'aretina manodinkodina rehetra izay te-hisarika antsika. Izaho koa dia naminany momba ny areti-mifindra amin'ity, toy ny mahatsapa an'izao. Ny zava-dehibe indrindra anefa dia manazava aho fa tsy afaka hahavita zavatra betsaka amin'ny ambaratonga ara-batana isika. Tena mieritreritra ve ianao fa raha miakatra eny an-dalambe ny tantsaha rehetra na rehefa mandry daholo isika rehetra dia afaka manova zavatra? Efa noporofoin'ny fanjakana fa afaka manidy ny toekarena manontolo izy ireo nefa tsy mahavariana azy ireo.
Ny zavatra azontsika atao ary tsy maintsy ataontsika dia mihoatra ny fanantenan'ny extraterrestrial tonga hamonjy antsika; mihoatra ny fanantenana izay ho tonga amin'ny famonjena antsika i Q Anon sy Trump. Ny azontsika atao dia lehibe lavitra! Ny azontsika atao dia ny momba ny fahafantarana ny herinao famoronana tany am-boalohany. Manazava aho fa ao amin'ny boky. Azonao atao ny mividy izany. Azonao atao koa ny mamaky azy io maimaimpoana amin'ny lahatsoratra maro, saingy satria ao an-trano ianao ary satria manam-potoana hamakiana ianao; satria afaka mahita ny herinao marina ianao; satria afaka mandresy ny tahotra isika ary satria mahavita zavatra betsaka mihoatra noho izay iheverantsika azy: noho izany ny mety hamaky ity famintinana ity:
Fanamarihana: Efa voatsikera imbetsaka aho tato ho ato izay nitady ny fivarotana boky hahazoana vola. Ity boky ity dia nosoratana tamin'ny fangatahan'ny mpamaky mba hahafahana manangona ireo lahatsoratra (maimaimpoana hamaky) nanomboka tato anatin'ny taona vitsy lasa izay ho vakiana ao anatin'ny indray andro.
Lisitry ny rohy loharano: threadreaderapp.com, businessinsider.com, bloomberg.com
Aza hadino fa ny horonantsary Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) dia fandrika vaovao sandoka
Coronavirus, fikambanana iray izay manamafy orina sy mahazo ny maha-olona?
Tags: Anon, lalina fanjakana, Featured, Janet, Jensen, manadio, Ossebaard, Q, Robert, Trump, Fiarovana amin'ny harato, harona fiarovana
25 Martsa 2020 ao amin'ny 19: 30
Toa tsy ho vita ny hanainga ny filoha breziliana Jair Bolsonaro tamin'ny fampitana azy androany hariva
Marihina fa tafiditra ao amin'ny paikady roa-toby sy ny fotokevitra fiarovana amin'ny fiarovana. Ka: ny fandavoana ny coronavirus na ireo milaza fa ho tsara ny zava-drehetra dia hosaziana vetivety noho ny fifohazana ny viriosy (farafaharatsiny ho aseho amin'ny fampahalalam-baovao sy amin'ny lafiny politika amin'ny tarehimarika). Dia ireo izay "mpitsikera" rehetra no mifoha. Eritrereto ireo toby fanabeazana, fanagadrana am-ponja, sns.
I Trump sy Bolsonaro dia tafiditra ao anatin'io lalao io. Impeachment Trump taorian'ny Paska dia toa safidy azo tanterahina.
25 Martsa 2020 ao amin'ny 22: 25
Vao nijery ny fampitana ny Jensen ary niseho ho marina ny fahitako… (35:25 min.)
28 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 51
Tahaka an'i Trump, i Bolsenaro dia manamafy ny tenany ho "olona adala sy ratsy toetra / ratsy fanahy." Tena mampihomehy mora ny mankarary raha vao hitanao ny fomba fiasa rehetra.
Jensen izao dia mihodina fitantarana kely hafa ihany koa momba ny politika NL. Ny mpanao politika dia voafitaka sy nofonosin'ny fampahalalam-baovao ambony indrindra, satria ny haino aman-jery dia manana fahefana be. (raha tsy manao ny zavatra lazainay ianao dia afaka atao ihany koa ny maha praiminisitra azy).
Ka araka ny filazan'i Jensen we (izay mifoha) dia tokony hampahafantatra ireo mpanao politika fa tsy maintsy miova izy ireo, dia ho tsara ny zava-drehetra.
25 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 01
Marina ny voalazan'izy ireo.
Azoko antoka fa mandeha amin'ny sehatra ara-panahy avokoa ny zava-drehetra. Betsaka ny olona tsy mahita an'io noho ny fanelingelenana rehetra. Rehefa tsy afaka miasa intsony ianao amin'ny farany, dia mbola miditra amin'ny netflix, ny adin-tsaina ary ny virus.
Ajanony ny tenanao, avelao, hialana, handroso ary hankanesana ho ambony kokoa.
25 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 38
Indraindray dia lasa kivy tanteraka izany. Ankoatry ny Printsy Charles any Angletera dia manana corona koa (maniry aho tsy ho ela lol)
Ny isan'ireo olona fantatra fa manana corona dia saika 1 amin'ny 50 ankehitriny. Saingy mahita izany ara-dalàna izany ny olona satria natsipy ho faty tao amin'ny haino aman-jery miaraka amin'ny tarehimarika (tsy mahatsiaro fitomboana mihitsy !!!) ohatra ny isan'ny olona manerantany (araka ny MSM) toa misy. Manodidina ny 400.000 XNUMX eo izany araka ny filazan'ny MSM
Ny 98% an'ny olona mahita io tarehimarika io dia tsy mahatsapa izay dikan'izany mihitsy. Raha 400.000 olona manerantany no manana corona dia midika izany fa ny olona ao amin'ny 1 eo amin'izao tontolo izao no tena manana corona !!!
Miaraka amin'ny rahalahiko sy ny olon-kafa vitsivitsy izay mifoha koa am-pifaliana, dia nanao fanadihadiana kely aho teo amin'ny olona 100 teo ho eo izay somary ambony noho ny faharanitan-tsaina, nanontany azy ireo, ankoatry ny zavatra hafa:
400.000 ny isan'ireo aretina ateraky ny corona eto amin'izao tontolo izao. Porofoina inona ny mponina eran'izao tontolo izao?
Ny valiny antonony dia (minoa na tsia) fa 400.000 ny olona eo anelanelan'ny 1% ary na dia ny 10% -n'ny mponina manerantany aza. Ny 2 amin'ireo 100 ihany no nanome ny valiny marina.
Midika izany fa rehefa maheno na mahita ny isan'ireo 400.000 misy fihenan'ny corona manerantany ny mpanoratra Holandey (ary mety ho olona avy any amin'ny firenen-kafa ihany koa), dia mieritreritra izy fa io dia isan-jaton'ny olona manerantany (wow efa 1% na Ny 5% -n'ny mponina eran-tany dia manana corona, mampidi-doza izany).
Izaho koa dia nahita izany avy amin'i Jair Bolserano. Ny zavatra mahatsikaiky dia navela handroso tsara ny hevitra mifanohitra amin'izany i Putin: nilaza i Putin fa tena mampidi-doza izany ary tokony hanaraka ny torolàlana nataon'ny Big Brother ny Rosiana ary tokony hifampitandrina tsara izy ireo (hoy i Putin momba an'i Rutte).
Maninona no saika matory ny olona eran-tany? Toa nofinidin'ireo ellisan'ny Lucifianana izy ireo. Azo antoka fa tokony hieritreritra kely ny olona iray ary hanao kajy fa tsy misy olona manana an'izao tontolo izao misy corona? (afa-tsy amin'ny olona malaza, saika toa misy corona daholo ny rehetra).
25 Martsa 2020 ao amin'ny 21: 32
Araka ny fantatrao dia mila "mihaino ireo manampahaizana" ianao
Na izany aza ... isa ny isa satria ny media sy ny politika no milaza amintsika ireo isa ireo. Truman Show? Tsy fantatrao.
Ny fantatray dia ny fandraisan'ny olona ny toerany fa amin'ny fitomboan'ny fampitomboana dia hitanao vitsy kely hatrany am-piandohana mandra-pivoaran'ny làlamby ho toy ny zana-tsipìka ny curve.
Tsy misy ilana azy izy io, mba hampifantohana ny olona amin'ny isa na ny isan-jaton'ny isan-karazany.
Mahasoa mba hampifantohana ny olona amin'ny zava-misy araka ny hitantsika azy.
26 Martsa 2020 ao amin'ny 02: 51
ny zavatra fantatro / nianarako taloha tamin'ny "fampiofanana ho an'ny daholobe" amin'ny fifandraisana ampahibemaso dia ny tarehimarika - na statistika araka izay niantsoana azy tsara - no fitaovana mety (fitaovana) entina milalao. Fifandraisan'ny daholobe = milalao / manodinkodina ny mpihaino. Miaraka amin'ny isa ianao dia afaka “mampihena” ny toe-javatra tsirairay / toe-javatra / olona amin'ny resaka ao anaty kodiarana. Ny salan'isa iray dia esorinao ny sandan'ny olombelona. Ny tarehimarika dia fomba ahafahana manala. Ny teknôlôjia ankehitriny dia tsy misy isa 2 fotsiny - ny aotra ary ilay iray mba hamoronana zava-misy. Mba hamorona overlay.
Tsy antony raha milaza ny momba ny tarehimarika isika ka mahatonga azy harefo. Raha very ny orientasi-nao ianao, dia ho very zavatra, izany hoe ny toe-javatra / ny firafitra.
Raha tsy manana firafitra / toe-javatra ianao, dia mamaritra ny kilalao amin'ny tanan'ny olon-kafa ianao.
Ny isa dia tandindona, fomba iray tsy refesina amin'ny fifandraisana (amin'ny saina tsy tonga saina). Raha ny marina dia tsy misy na inona na inona ireo isa ireo fa tsy miteny na inona na inona, nefa amin'ny fotoana iray ihany dia milaza ny zava-drehetra amin'ny mpanefy izy. Efa tonga amin'ny fotoana izay hahatongavantsika ny famaritana ny tantara (ny boribory, ny spins).
Ampitahao koa ireo isa amin'ny teny anglisy izay mitantara mihoatra noho izay mety ho azon'ny fijerinao voalohany (ny lanjan'ny tavany). Mora miparitaka. Ny isa / isa dia vector ho an'ny fihetseham-po (= fihetseham-po ambany) tsy misy (tsy nahatsiaro tena) nahatsikaritra fa raha tsy zavatra ianao. Ny rafi-pampianarana dia natao manokana amin'izany. Ny isa / isa dia atolotra antsika amin'ny endrika tokana, ny endrika tsy misy. Izany no antony mahatonga antsika “mianatra manala kajy” hahafahana miala amin'ny fahalalana rehetra. Na izany na tsy izany, tantara hafa lalindalina kokoa. Antenaina fa hanaiky izany bebe kokoa ianao ary handinika izany.
26 Martsa 2020 ao amin'ny 07: 04
Ohatra, ny mametraka olona eo ambany fitenenana hipnosis (izay no mahatonga ny olona hijery fahitalavitra na fantsona YouTube), tsara kokoa ny manisy tarehimarika isa vitsivitsy. Izany dia vokatry ny fisafotofotoana ireo fizotran'ny eritreritrao. Miezaka ny hanaraka ny isa na ny kajy maro be izy ireo, saingy satria ny atidohanao dia miatrika "fitandremana", ny feon'ny mpandahateny dia manilika ny fahatsiarovan-tena ary afaka mametraka ny sain-tsainao tsy an-tsaina amin'ny alalàn'ny vatofantsika.
Mampiasa an'io teknika io ihany koa i Robert Jensen, Robert Jensen.
Hitanao be dia be amin'ny olona toa an'i Jeroen Pauw ihany koa. Manana teknika marobe ao amin'ny NLP sy hypnosis miresaka ianao, nefa ny antontan'isa sy isa dia tena mandeha tsara.
Izany no antony mahatonga anao hanana ny toetr'andro mialoha ny faran'ny journal. Avy eo hahita ny isa ianao ary hatsipy miverina ao amin'ilay sarintany. Ho afa-tsy amin'ny sari-tany ianao (hypnotized).
25 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 58
Faran'ny onjan-tratran'ny flu!
Avy ny onja manaraka!
25 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 38
koa raha hitako marina, aorian'ny herinandro 11 amin'ny 2020 dia mety maty eto isika fa tsy ny tsipika fototra?
26 Martsa 2020 ao amin'ny 07: 37
"Ahoana no ahitanao fa mpanohitra mifehy an'i Freeland aho? Mipetraka ao amin'ny trano finday aho ary hasehoko anao ny kaontiko banky. ” Eny ry Janet, asehoy ahy ny kaontinao amin'ny bankinao ary avy eo asehoy ny kaonty banky hafa.
"Raha mba niantso ahy vao niantso ahy dia namboariko izay"
Ary ny lisitry ny Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) dia mihetsika ao ambanin'ny lahatsoratra miaraka amin'ny fanararaotana mahazatra handoro an'i Vrijland (toy ny ataony amin'ny bilaogy sy ny media sosialy rehetra; izany no asany).
Mazava ho azy fa nanitsy ny lahatsary i Janet vokatry ny fitsikerana nataoko. Raha "niantso azy" fotsiny aho, dia naka ny horonantsary fampiroboroboana Q Anon miisa 3 be dia be, ary nanao vaovao ary namboatra ny tantarany manontolo. Eny Janet, sa tsy izany? Kolder mazava ho azy. Heverina tsara izany, voaomana tsara ary ny fampiroboroboana Q Anon dia natomboka tamin'ny fotoana mety.
« Coronavirus covid-19 fanavaozana mihidy: rehefa mifoha ianao ka mahatsapa fa voafandrika, inona no azonao atao?
Nandrahona ny handefa flamethrowers ny ben'ny tanàna italiana hiady amin'ny coronavirus »
Total visits: 1.212.605